दशैँमा कस्तो मासु खाने ? र, कसरी आफ्नो तौल सन्तुलनमा राख्ने ? पढ्नै पर्ने टिप्स - ज्ञानविज्ञान
दसैँमा खसी–बोका तथा च्यांग्रा खरिद गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने एक पटक विचार गर्नुहोस । ग्रामीण भेगमा त दसैँलाई भनेर केही समयपहिलेदेखि नै बोका पालेर राखिएको हुन्छ । तर, सहरी क्षेत्रका बासिन्दाले खसी–बोका किन्दा विशेष सजग हुनुपर्छ । कस्तो खसी बोका किन्ने त ?
मोटा खसी–बोका नकिन्नुस । मोटा खसीको मासु खानु दुई कारणले हानिकारक हुन्छ । पहिलो त उनीहरु रोगी हुन्छन्, दोस्रो मोटो जनावरको शरीरमा भएको बोसोले पनि असर गर्छ । बोसो स्याचुरेटेड फ्याटी एसिड हो । यसले कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाउँछ । त्यसैले खसी किन्दा सकेसम्म दुब्लो नै किन्नुहोस ।
खसी किन्दा उसको भुँडीमा ध्यान दिनुपर्छ । भुँडी झरेको खसी रोगी हुन सक्छ । भुँडी झोलिएको खसीमा जुका पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । जुका परेको खसीको मासु खाएमा जुका हाम्रो पेटबाट दिमागसम्म पुग्ने खतरा रहन्छ ।
खसी र बोका खाने उत्तम उमेर फरक–फरक हुन्छ । अन्दाजी आठ महिनादेखि एक वर्षसम्म उमेरको बोकाको मासु स्वस्थकर हुन्छ । यसमा बोसोको मात्रा तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । यसैगरी, खसी कलिलोभन्दा छिप्पिएकै खानु ठीक हुन्छ । छिप्पिएको खसीको मासुमा फ्याट कन्टेन्ट तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ ।
खसीको शारीरिक अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । किन्न आँटेको खसी–बोकालाई बाँधेको ठाउँबाट फुकाउनुहोस र हल्का धपाएजस्तो गरेर हिँड्न लगाउनुहोस । फुर्तिलो, छुँदा बुरुक्क उफ्रिने, चलमलाउने हुनुपर्छ । आँखामा चिप्रा आएको, नाकबाट सिंगान बगिरहेको खसी–बोका किन्नेतिर लाग्दै नलाग्नुहोस ।
त्यसैगरी रौँ झुस्स भएको खसी पनि स्वस्थ हुँदैन । गोटा परेको जुत्तो गरेको छ भने निरोगी भएको बुझ्नुपर्छ । पुच्छर आसपासमा छेरेको लतपतिएको देखिएमा खसी–बोका रोगी छ भन्ने जान्नुपर्छ ।
दशैंमा तौल बढेको छ भने सजिलै घटाउन अपनाउनुस् यी १० टिप्स
फिटनेस विशेषज्ञ ओमारका अनुसार तौल घटाउन ३० प्रतिशत व्यायाम, ७० प्रतिशत डाइट र अन्य कुराको भूमिका हुने गर्दछ । यी अन्य कुरामा स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने, मज्जाको निन्द्रा, जंक फूडबाट बच्ने, तनावबाट बच्नु, धुम्रपान र मद्यपानबाट बच्नेलगायतका कुरा पर्दछन् ।
व्यायाम र डाइटिङका साथै यदि केही कुरा ध्यानमा राखे निकै सजिलै तौल घटाउन सकिन्छ । ओमारले यस्तै १० टिप्टबारे जानकारी दिएका छन् जसलाई तौल घटाउने व्यायाम र डाइट प्लानसँगै अपनाएर निकै चाँडै तौल घटाउन सकिन्छ ।
१. थोरै थोरै खानुहोस्ः
एकैपटक धेरै खाँदा मेटाबोलिजम स्लो हुन्छ । ३–४ घण्टामा थोरै खाँदा तौल घट्नमा सहयोग मिल्दछ ।
२. स्वस्थ खानेकुरा खानुहोस्ः
फाइबर्स र प्रोटिन धेरै खानुहोस् । कार्बोहाइड्रेट र फ्याट कम गर्नुहोस् । सलाद धेरै खानुहोस् । जंक फूडबाट बच्नुहोस् ।
३. भरपूर निन्द्राः
राती अबेरसम्म जागा हुने र पूरा निन्द्रा नपाउँदा तौल बढ्ने गर्दछ । नियमित ६–८ घण्टा सुत्नुहोस् ।
४. भर्याङको प्रयोग गर्नुहोस्ः
यसले शारिरिक व्यायाम हुनेछ । अतिरिक्त क्यालोरी बर्न हुन्छ । रक्तसंचार राम्रो हुन्छ र तौल घट्छ ।
५. पर्याप्त पानी पिउनुहोस्ः
दैनिक ६ देखि ८ गिलास पानी पिउँदा क्यालोरी इन्टेक कम हुन्छ । शरिरमा टक्सिन जम्मा हुँदैन । तौल कम हुनेछ ।
६. मैदा, चिनीजस्ता खानेकुराबाट बच्नुहोस्ः
यसमा रिफाइन्ड कार्बोहाइड्रेट हुन्छ । यसले शरिरमा पानी जम्मा गराउँछ र तौल बढाउँछ ।
७. घरको काम आफैं गर्नुहोस्ः
घरको सर–सफाई, बगैंचाको कामलगायतका सानातिना काम आफैं गर्दा शरिरको अतिरिक्त क्यालोरी बर्न हुन्छ ।
८. नशा छाड्नुहोस्ः
नशालु पदार्थ शरिरमा सजिलैसँग मेटाबोलाइज हुन पाउँदैन र बोसोको रुपमा जम्मा भएर मोटोपना बढाउँछ ।
९. चिया, कफी, कोल्ड ड्रिङ्क्स कम गर्नुहोस्ः
यसमा चिनी र लुकेको क्यालोरी हुन्छ जसका कारण तौल बढ्ने समस्या हुनसक्छ ।
१०. नुनको प्रयोग कम गर्नुहोस्ः
यसले शरिरमा धेरै पानी जम्मा गराउँछ । तौल बढाउँछ । पोटासियमयुक्त खानेकुरा जस्तै पालुङ्गो, केरा खाँदा फाइदा हुन्छ ।
रातो मासु खाने यी हुन् सही तरीका
दशैंमा रातो मासुको खपत बढी हुने गर्छ । विशेषगरी, खसी, बोका, भेडा र च्यांग्राको मासु दशैंमा अन्य बेलाको तुलनामा ८० प्रतिशतसम्म बढी खपत हुन्छ ।रातो मासुको अत्यधिक सेवनले तौल बढ्नुका साथै बोसो लाग्ने गर्छ । त्यसबाट बच्न सही तरीका अपनाउनु जरुरी छ ।
प्रोटिनको मुख्य आधार मानिने रातो मासुमा बोसोको मात्रा अधिक हुन्छ । यस्ता मासु मनपरि तरीकाले सेवन गर्दा तौल बढ्छ । त्यसका लागि मासु काट्दै ध्यान दिनुपर्छ ।सकेसम्म बोसो तथा छालारहित मासु छनोट गर्नुपर्छ । छातिको मासुमा बोसो कम हुन्छ ।
बिनाडाइटिङ शरीरको तौल घटाउने अर्को उपाय भनेको क्यालोरीयुक्त खानेकुरा कम गर्नु हो ।एक अध्ययनका अनुसार एउटा मानिसले दिनमा आफूले लिने पाँच सय क्यालोरी कम गर्दा सातामा करिब एक पाउन्ड घटाउन सकिन्छ ।
पौष्टिक आहारमा सन्तुलन
शरीरको अतिरिक्त तौल कम गर्न पौष्टिक आहारमा सन्तुलन आवश्यक छ । त्यसका लागि भिटामिन, मिनरल्सलाई सन्तुलित ढंगले ग्रहण गर्नुपर्छ ।अमेरिकी कृषि विभागका अनुसार रातो मासु सेवन गर्ने मानिसले तौल बढ्न नदिन प्रशस्त मात्रामा दूध, दही, प्रोटिन, फलफूल, सागसब्जी र अनाज सेवन गर्नु जरुरी छ ।बोसोरहित मासुका साथमा पोषकतत्वको दैनिक सेवनले कोलेस्ट्रोलको उतारचढावलाई नियन्त्रणमा मद्दत पुग्छ ।
मासु पकाउने विधि
मासु पकाउँदा त्यसको विधिबारे ध्यान दिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले मासुमा भएको सबै बोसो हटाउनुपर्छ ।सकेसम्म गि्रल गरेको र उसिनेको मासुको सेवन उत्तम हुन्छ । यदि तपाईं तारेको वा पोलेको मासु खान चाहनुहुन्छ भने पनि त्यसमा भएको बोसो तथा चिल्लोपनालाई हटाउनु आवश्यक हुन्छ ।
थाहा पाउनुहोस् मासु खाँदा कति फाइदा कति बेफाइदा ?
धैरै मानिसले स्वादका लागि मासु खाने गर्छन् । मासुमा स्वाद मात्र नभएर शरीरलाई आवश्यक पोषण पनि हुन्छ । तर, मासुको अत्यधिक प्रयोग भने मानव स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छैन । स्वादकै लागि मानिसले बिहान–बेलुकी नै मासु प्रयोग पनि गर्छन् । जसले मानिसलाई फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा गर्छ । मासुको मात्रा र खाने विधिबारे केही टिप्स :
यस्ता मासु स्वस्थकर
मासुमा प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, भिटामिन, खनिज पदार्थ र पानीको मिश्रण रहेको हुन्छ । जसको प्रयोगले शरीरलाई फाइदा पुर्‍याएको हुन्छ । तर, उसिनेको मासु प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यका लागि बढी हितकर हुन्छ । उसिनेको मासु खाँदा अनावश्यक चिल्लो पदार्थबाट बच्न सकिन्छ ।
मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मिर्गौलाको समस्या, कोलेस्ट्रोल बढी भएमा बोसो नभएको मासु प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ । सकभर रातो मासु कम खानुपर्छ । सेतो मासु भने स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ । तुलनात्मक रूपमा खसी, सुँगुर, राँगाको भन्दा कुखुराको मासु र माछा प्रयोग गर्नु बढी श्रेयष्कर हुन्छ।
कतिपय मानिसले मासुमा भएको बोसो अत्यधिक प्रयोग गर्ने गर्छन् । गाउँघरतिर त छुट्टै निकालेर बोसो खाने प्रचलनसमेत छ । तर, स्वास्थ्यका लागि भने सकेसम्म बोसो निकालेर मात्र मासुको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।
बढी चिल्लो र पिरो बनाएर मासु खानु हुँदैन । यसरी खाँदा ग्यास्ट्रिक, प्रेसर, बान्ता, अपच, फुड पोइजनलगायत समस्या आउन सक्छ ।शरीरका लागि केही मात्रामा राम्रो मानिए पनि धेरै मासुको प्रयोगले भने हानि गर्न सक्छ । त्यसैले दिनमा तीन–चार पिस मात्र मासु प्रयोग गर्नुपर्छ । डिनरमा भने मासु नखाएकै राम्रो । किनभने डिनरमा मासु खाँदा अपच, मोटोपनलगायतका समस्या आउन सक्छ ।पकाएको मासुलाई कहिल्यै पनि फ्रिजमा राख्नुहुँदैन । पकाएर फ्रिजमा राखेको मासुमा पौष्टिक तत्व हुँदैन ।
मासु खाएपछि शरीरलाई व्यायाम वा शारीरिक क्रियाकलापको अवश्यकता हुन्छ ।
Don't Miss it यस्ता छन् जीवनभर निरोगी रहने केहि सूत्र
Up Next नीम जति तितो छ यसको फाइदा पनि त्यति नै मिठो छ । नीमको प्रयोग कसरी गर्ने, कस्ता रोगहरु ठिक पार्छ, जान्नुहोस्
1 week ago mygyanbigyan
के तपाईलाई पेटभरी खादा पनि छिट्टै भोक लाग्छ ? किन ? जान्नुहोस्
समयमा टन्न टन्न खानेकुरा खाने गर्दा पनि केही कोहि मानिसलाई छिन छिनमा भोक लागि रहने हुन्छ । छिन छिनमा लागेको…
गर्भवती महिलाले बदाम खानुको यस्तो छ अचुक फाईदा – जान्नुहोस् बदाम खानुको फाईदा
बदाममा स्वास्थ्यको खजाना लुकेको छ । यसमा पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ जुन शरिरको वृद्धिका लागि निकै आवश्यक हुन्छ । यदि…
मित्रताको महत्व कति सम्म हुन्छ ? कस्ता सम्बन्ध लामो समय टिक्छन र कस्ता टिक्दैनन् ? जानीराखौ
त्यसो त कतिपय व्यक्तिले स्वार्थ राखेर मित्रता गाँस्छन् । यस्ता सम्बन्ध लामो समय टिक्दैन । जब कुनेपनि सम्बन्धमा स्वार्थले ठाउँ…
नुहाउनु अघि कपालमा किन तेल लगाउनुपर्छ ? जानी राखौ कपालमा तेल लगाउँदाको फाइदा
सुन्दर रहनको लागी अनुहारको सुन्दरतासगैं कपाल पनि आकर्षक र बलियो हुन जरुरी छ । कपाल स्वस्थ, आकर्षक र बलियो बनाउँनको…
8 months ago mygyanbigyan
पत्रिकामा राखेर चटपटे, पकौडा वा अन्य खानेकुरा खानुहुन्छ ? अब याे पढ्नुहोस्
कुनै पनि खानेकुरा पत्रपत्रिकामा राखेर दिनु र पत्रपत्रिकामा पोको पारेर राख्नु हाम्रो समाजमा सामान्य मानिन्छ । तपाईं चटपटे खान जानु…
खुशी कहाँ खोज्ने त ?
हामी पढेर परीक्षामा उच्च अंक हासिल गर्न चाहन्छौं । राम्रो जागिर खान चाहन्छौं । भौतिक सुख सुविधाले सम्पन्न हुन चाहन्छौं…
तपाइको पिसाबको रङ्गले बताउँछ, तपाईँलाई के भइरहेको छ
मानिसको शरिर पनि अचम्मको हुन्छ । शरिरको कुनै भागमा देखिएको केहि फरक चित्रले शरिरमा भएको परिवर्तनको संकेत गर्छ । जस्तै…